တရုတ်လ lander အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလကျောက်က New အမျိုးအစား - သတင်း Rule
တရုတ်လ lander အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလကျောက်က New အမျိုးအစား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “တရုတ်လ lander အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလကျောက်က New အမျိုးအစား” တိ Radford ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 22 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 16.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များလပေါ်ကျောက်သစ်တစ်ခုမျိုးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ. တစ်ဦးမောင်းသူမဲ့တရုတ်လ lander, အတွက်စတင် 2013, လုံးဝအကြားအမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးများကစုဆောင်းကောက်ယူဘာမှမတူဘဲမီးတောင်ချော်ရည်များနှင့်ဖော်ထုတ်ဓာတ်သတ္တုဖွဲ့စည်းမှု၏ရှေးဟောင်းစီးဆင်းမှုစူးစမ်းခဲ့သည် 1969 နှင့် 1972, သို့မဟုတ်အတွက်နောက်ဆုံးဆိုဗီယက် lander အားဖြင့် 1976.
သတင်း, အ Mare Imbrium အတွက်သက်ရောက်မှုမီးတောင်ကနေစေလွှတ်, ဂြိုဟ်ရှာဖွေရေးကိုရုရှား၏ထိနျးသိမျးမရှိတော့ကြောင်းအခြားသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်, အမေရိကန်တွေသို့မဟုတ်ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ: ဂျပန်, အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒုံးကျည်အပေါ်လကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းစတင်ကြပြီ. ဗြိတိန်နိုင်ငံက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်တုလွှင့်တင်, Prospero, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒုံးပျံအပေါ်, Black က Arrow ကို, Woomera အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပစ်လွှတ် site မှ, သြစတြေးလျ, တွင် 1971 ပြီးတော့ space ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှနုတ်ထွက်.
Related: လူသားတွေဟာလမှပြန်လာကြလိမ့်မည်သည့်အခါ? podcast
အပိုလိုအစီအစဉ်၏အဆုံးကတည်းက, အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းကနေအများအားဖြင့်၎င်းတို့၏လသုတေသနလုပ်ငန်းကောက်ယူခဲ့ကြ. Chang'e-3, တရုတ်နိုင်ငံ၏မောင်းသူမဲ့လမစ်ရှင်, တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ငယ်ရွယ်ချြောစီးဆင်းမှုအပေါ်တစ်ဦး Yutu ကိုခေါ် rover သို့မဟုတ် "ကျောက်စိမ်းယုန်" ချ. ဒီ rover လကိုအပေါ်တစ်ဦး mineralogical နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေဖော်ထုတ်ရန်ထွက်သော, အတူ basalt "ထူးခြားသော Composite စဝိသေသ။ "
လေ့လာမှု, အစီရင်ခံ သဘာဝတရားကဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး, ဂြိုလ်တုတူရိယာမှဖတ်ကြားတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထား, နှင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းများ၏ဇစ်မြစ်အပေါ်သစ်ကိုအလင်းပစ်ရန်.
တစ်ဦးအင်္ဂါဂြိုဟ်အရွယ်အစားအရာဝတ္ထုစောစောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏သမိုင်းအတွက်ဂြိုဟ်သည်ကမ္ဘာမြေသို့ပျက်ကျခဲ့သောအခါထိုလဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီဟုယူဆနေသည်. အတိုက်မှုမှအပျက်အစီးများ coalesced နှင့်အအေး, ဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းတွင်နက်ရှိုင်းသောရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်သည်ကမ္ဘာအပေါ်ယံမြေလွှာအောက်ကျောက်ကိုဖွင့်အပူ, နှင့် 500 သန်းနှစ်ကြာပြီးနောက်, မီးတောင်ချော်ရည်ဒါခေါ် "သမုဒ်" သို့မဟုတ် maria ဖွဲ့စည်းရန်လပေါ်သက်ရောက်မှု Crater သို့ slurped.
အဆိုပါ Yutu rover ရဲ့တူရိယာဖြစ်နိုင်အကြောင်းကိုစီးကြောင်းချြောဆန်းစစ်စတင်ခဲ့သည်3ဘီလီယံကိုလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း. အဘယျသို့သူတို့သည်တွေ့ညဘက်ကျယ်ပြန့်နိုးသာမန်နိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ဂြိုဟ်သိပ္ပံပညာရှင်များများအတွက်အံ့သြသည်. Geochemists အအအေးချြောအတွက်သတ္တုဓာတ်၏ကိုအခုမှရောနှောနေတဲ့ကြောကျစီးဆင်းမှုရဲ့သမိုင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နိုင်. Basalts အာကာသယာဉ်မှူးလေ့လာရေးခရီးသွားနေဖြင့်နမူနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆိုဗီယက် Luna စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်စုဆောင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ခွဲခြားခံရဖို့ကိုထိန်း: တိုက်တေနီယမ်မြင့်မားဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်အနိမ့်.
သို့သော်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိမှုအတွက်မွန်းအပေါ်ပထမဦးဆုံးအပျော့ဆင်းသက်မှဖော်ပြခဲ့သည် 40 အနှစ်တိုက်တေနီယမ်အကြောင်းအရာအတွက်အလယ်အလတ်နှင့်သံအောက်ဆိုဒ်၌ငွေရတတ်သောနှစ်ဦးစလုံးသည်.
"ဒီမတူကွဲပြားမှုလရဲ့အထက်ဝတ်လုံကမ္ဘာမြေရဲ့ထက်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အများကြီးလျော့နည်းယူနီဖောင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်. ထိုအခါအသက်အရွယ်နှင့်အတူဓာတုဗေဒ correlating, ကျနော်တို့လရဲ့မီးတောင်အချိန်ကျော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်,"စိန့်လူးဝစ်၏ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် Bradley Joliff ကပြောပါတယ်, တရုတ်အသင်းအတွက်သာအမေရိကန်မိတ်ဖက်.
ကျောက်ထဲမှာသတ္တုဓာတ်၏ရောနှောနေတဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြ: သွန်းသောကျောက်၌သတ္တုဓာတ်ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်မှာ crystallize သောကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျောက်ကိုတစ်ဦးဂြိုဟ်၏နက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်းမှသဲလွန်စကယ်တင်တတ်၏.
"ကိုလမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အဆိုပါ variable ကိုတိုက်တေနီယမ်ဖြန့်ဖြူးလရဲ့အတွင်းပိုင်း homogenised မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု,"ပါမောက္ခ Joliff ကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့နေဆဲဒီဖြစ်ပျက်ပုံကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ "
← နယူးမျိုးဗီဇသီအိုရီလူ့ထောက်လှမ်းရေးကိုနားလည်ရန်လမ်းခင်းစေခြင်းငှါ, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2015 →